Iindaba -Ireiki (Hangzhou) yeTekhnoloji yokuCoca i-Co, Ltd. iAhma Asia Exhibition yaphinda yabuya (i-2019 AchemAsia)
Reiki (Hangzhou) Technology Filtering Co., Ltd. Umboniso kwakhona Ahma Asia Exhibition (2019 AchemAsia)
Ukusuka nge-21 ukuya kwi-23 kaMeyi, i-Akhma Asia Exhibition (i-2019 AchemAsia) kunye ne-11th International Chemical Chemical Production Expo zabanjwa eShanghai National Convention kunye neZiko leMiboniso.
Njengeshishini elikhokelayo kushishino lokucoca, uZhejiang Ruiqi (Hangzhou) Ukucoca iTekhnoloji Co, Ltd. iphinde yavela ukubonisa izixhobo zokucoca eziphambili kunye nenkqubo yenkonzo engqongqo yobungcali kwiindwendwe ezikuloo ndawo. Umququzeleli wawongwa iwonga lomboniso obalaseleyo.
Ahma Asia Exhibition (AchemAsia) yasekwa ngo-1989. Emva kweminyaka engaphezu kwama-30 yophuhliso, uye waba isiganeko kakhulu ngamazwe kwaye liphezulu kakhulu kwishishini inkqubo eTshayina kwaye ulonwabela igama phezulu kushishino lweekhemikhali jikelele. Umboniso utsale malunga namashishini angama-400 akumgangatho ophezulu asuka eChina nakwamanye amazwe.
Umxholo womboniso ugxile ekukhuleni nakwinqaku lobuchwephesha lobuchwephesha kwishishini lase China eliphambili lenkqubo yemichiza, kwaye liya kulawulwa kukuzinza kwezobuchwephesha kwishishini, ngenkqubo yetekhnoloji, itekhnoloji yamayeza, unyango lwamanzi kwimizi-mveliso, ukhuseleko lwezityalo kunye nenkqubo, kunye nedijithali Itekhnoloji njengeyona nto iphambili, egubungela ishishini liphela, ibonelela "ngesiqhelo esitsha" kunye "nethuba elitsha lenguquko yezoqoqosho lwase China".
Ruiqi (Hangzhou lokucoca ulwelo) Technology Co., Ltd.besakha ubonelelo ngezixhobo lokucoca ulwelo kunye nenkqubo yemfuno ukusukela ngo-1990, egxile ekusebenzeni nabavelisi bokucoca abagqwesileyo kwihlabathi liphela. Ngoncedo lwabo, ngokuthe ngcembe eJamani, e-Itali, eUnited States nakwamanye amaziko emveliso yemithombo yeendaba yokuhluza ukufumana amaqabane anokuthenjwa. Kukhuphiswano olunocwangco kunye nemeko yonxibelelwano, ngokuthe ngcembe ithatha indawo kwimakethi yeefilitha zehlabathi.
Ukusukela ngeminyaka yoo-1990, ubonelelo ngezixhobo zokucoca ulwelo kunye nenkqubo yemfuno yakhiwe, kugxilwe ekusebenzeni nabona bavelisi behlabathi bacocekileyo. Kwixesha elizayo, siza kuqhubeka nokuphuhlisa kolu shishino, sizibophelele ekubeni ngabakhokeli beendaba zokucoca iindaba abakhokelayo, sikhokelela kuphuhliso kunye nokwenza izinto ezintsha kumzi mveliso weendaba wokucoca ulwelo.
Ixesha lokuposa: Mar-24-2021